१० मोबाइल मार्केटि Strate रणनीतिहरू Martech Zone
बुधबार, जुन 27, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
जब तपाईं मोबाइल मार्केटि aboutको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ कि हरेक मार्केटरले कस्तो प्रकारको रणनीति प्रयोग गरिरहेको छ त्यसको फरक चित्र हुन्छ। आज हामीले करीव companies० कम्पनीहरु संग एक व्यापक मोबाइल प्रशिक्षण सत्र समाप्त भयो। जस्तो मार्लिनस्पाइक परामर्श प्रशिक्षण पाठ्यक्रममा हामीसँग काम गर्‍यो, यो स्पष्ट भयो कि मोबाइल मार्केटिंगमा अरूले सोचे भन्दा धेरै छ।
यहाँ विचार गर्नका लागि १० मोबाइल मार्केटि Strate रणनीतिहरू छन्:
आवाज - जे भए पनि, यो सँधै छोडिन्छ :)। चाहे यो केवल तपाइँको साइट मा एक फोन नम्बर को लिंक छ, या कल एनिमेसन उपकरणहरु को माध्यम बाट एक व्यापक मार्ग र प्रतिक्रिया रणनीति विकास Twilio, तपाईंको कम्पनीलाई कल गर्न सजिलो बनाउने र तपाईंको सम्भावनाहरूलाई चाहिने जानकारी प्राप्त गर्दा रूपान्तरण मेट्रिक्स बढाउनेछ।
एसएमएस - छोटो सन्देश सेवाहरु, वा टेक्स्टिंग, विश्वमा सबैभन्दा सेक्सी टेक्नोलोजी नहुन सक्छ, तर टेक्स्ट्ग टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले वृद्धि र गोद लिन देख्छन्। यो केवल एक युवा कुरा होइन ... हामीमध्ये धेरैले विगतमा भन्दा धेरै पाठ गर्दैछौं।
मोबाइल विज्ञापनहरू - यी पुरानो ब्यानर विज्ञापनहरू छैनन्। आजको मोबाइल विज्ञापन प्लेटफर्मले प्रासंगिकता, स्थान र समयको आधारमा विज्ञापनहरूलाई धक्का दिन्छ ... यसले सम्भव बनाउँदछ कि तपाईंको विज्ञापन सही व्यक्तिले देख्नेछ, सही ठाउँमा र सही समयमा।
QR कोडहरू - ओह म तिमीलाई कसरी घृणा गर्छु ... तर ती अझै काम गर्दछन्। माइक्रोसफ्ट फोनले तिनीहरूलाई कुनै अनुप्रयोगको प्रयोग बिना नै पढ्छ र धेरै व्यवसायहरूले ठूलो मोचन दरहरू देख्दछन् - विशेष गरी जब कसैलाई प्रिन्टबाट अनलाईनमा धकेल्दा। तिनीहरूलाई अझै खारेज नगर्नुहोस्।
मोबाइल ईमेल - मोबाइल ईमेल खुला दरहरू डेस्कटप खुला दरहरूलाई पार गर्यो तर तपाईंको ईमेल अझै still बर्ष पहिले खरीद गरेको न्यूजलेटर डिजाइन हो र मोबाइल उपकरणमा सजीलै पढ्न सक्दैन। तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ?
मोबाइल वेब - यदि तपाईंको साइट तैयार छैन, तपाईं आफ्नो उपकरण बनाउन कुनै पनि उपकरणको एक तैनाती गर्न सक्नुहुन्छ साइट मोबाइल मैत्री। तिनीहरू मध्ये कुनै पनि पूर्ण छैनन्, तर तिनीहरू केहि पनि भन्दा राम्रो काम गर्दछन्। तपाईले हराउनु भएको ट्राफिक हेर्नका लागि तपाईको मोबाइल बाउन्स रेटहरू जाँच गर्नुहोस्।
मोबाइल वाणिज्य (mCommerce) - कि यो टेक्स्ट सन्देश मार्फत खरीद हो, मोबाईल अनुप्रयोग, वा आउँदै गरेको कार्यान्वयनको क्षेत्र संचारको नजिक, व्यक्तिहरू उनीहरूको मोबाइल उपकरणबाट खरीद निर्णयहरू गर्दै छन्। के तिनिहरु तपाईबाट किन्न सक्छन?
स्थान सेवाहरू - यदि तपाइँ तपाइँको आगन्तुक कहाँ छ थाहा छ भने, किन उसलाई उसलाई तपाईं बताउन? स्थान आधारित वेब साइटहरू वा मोबाइल अनुप्रयोगहरूले तपाईंको ग्राहकहरूको लागि तपाईंलाई फेला पार्न र तपाईं पुग्न सजीलो बनाउन सक्छ।
मोबाइल अनुप्रयोगहरू - म सुरुमा मोबाइल अनुप्रयोगहरू बारेमा धेरै आशावादी थिएन ... मैले सोचें कि मोबाइल वेब ब्राउजरले तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दछ। तर व्यक्तिहरू उनीहरूको अनुप्रयोगहरूलाई मन पराउँछन्, र उनीहरू अनुसन्धान, फेला पार्ने, र उनीहरूमार्फत व्यापार गर्ने ब्रान्डबाट खरीद गर्न मन पराउँछन्। तपाईंको मोबाईल अनुप्रयोगको शीर्षमा एक बाध्यकारी अनुप्रयोग, स्थान सेवाहरू र सोशल मिडिया प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईं संख्या आरोहण देख्नुहुनेछ। तपाईंको मनपर्नेमा SDK इम्बेड गर्न निश्चित गर्नुहोस् विश्लेषण प्लेटफर्म तपाईलाई अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न!
ट्याब्लेटको - ठिक छ, म तिनीहरूलाई मन पराउँदिन कि उनीहरूले कि त ट्याब्लेटहरू मोबाइलको साथ लम्प गरे पनि ... तर किनभने अनुप्रयोगहरू र ब्राउजरहरूको कारण, म अनुमान गर्दछु तिनीहरू अलि फरक छन्। आईप्याड, किन्डल, नुक र आगामी माइक्रोसफ्ट सर्फेसको अविश्वसनीय बृद्धिसँग, ट्याब्लेटहरू बन्ने छ दोस्रो स्क्रिन मान्छेहरू टेलिभिजन वा बाथरूम (eww) मा पढ्दा प्रयोग गर्दैछन्। यदि तपाईंसँग स्वाइप छैन भने ट्याब्लेट अनुप्रयोग (हाम्रो ग्राहक Zmags जस्तै) जो ट्याब्लेटले आपूर्ति गर्न सक्ने अद्वितीय प्रयोगकर्ता अनुभवको फाइदा लिन्छ, तपाईं हराउनुभएको छ।
धेरै कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू र सेवाहरू मोबाइल रणनीति वरिपरि तैनाथ गर्न पर्याप्त बाध्यकारी ठानेका छैनन्। म एक कम्पनी को एक महान उदाहरण प्रदान गर्ने छ जो एक उद्योग मा एक अविश्वसनीय मोबाइल अनुप्रयोग छ तपाईले सोच्न सक्नुहुन्न… Behr। बेहरले ए कलरस्मार्ट मोबाइल अनुप्रयोग यसले तपाईंलाई रंग संयोजनहरू पूर्वावलोकन गर्न, तपाईंको क्यामेरा फोनको प्रयोग गरेर र match मिलाउन, नजिकबाट खरीद गर्नको लागि पत्ता लगाउँदछ… र र combination संयोजन सिफारिशहरूको उत्कृष्ट चयन।
टैग: स्थान सेवाहरूमोबाइल अनुप्रयोगमोबाइल मार्केटिङमोबाइल मार्केटिंग रणनीतिहरूमोबाइल मार्केटिंग वेबछोटो सन्देश प्रणालीएसएमएसपाठ सन्देशआवाजआवाज स्वचालन
फेसबुक पृष्ठ सिर्जना गर्न चरणहरू